Haintrano teny Anosibe: olona efatra indray maty kilan’ny afo | NewsMada
Olona efatra, hoy ny loharanom-baovao voaangona teny an-toerana. Ny polisy kosa nilaza fa olona dimy no maty, kilan’ny afo, vokatr’ilay haitrano nitranga tetsy Anosibe ny alin’ny alarobia teo.
May kilan’ny afo ny mpianaka sy ny lehilahy roa teny Anosibe, ny alin’ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 11 ora. Vehivavy iray sy ny zanany niaraka tamin’ny lehilahy roa ireo namoy ny ainy ireo, nandritra ny haintrano. Nilaza ny polisy fa olona dimy ny maty, izay tsy fantatra ny mombamomba azy ireo.
Fantatra fa telo ny olona naratra tamin’ity loza ity. Voalaza fa nisy tamin’ireo ny tapa-tongotra noho ny fitsambikinana avy eny ambony varavarankely. Ny sasany, main’ny afo ihany koa. Manodidina ny 119 ny trano hazo may, niampy trano biriky enina. Fivarotana enta-madinika, fivarotana saribao sy hazo ny sasany amin’ireo trano may.
Mbola tao anatin’ny fihainoana ny tatitra ny voka-pifidianana tamin’ny fahitalavitra ny ankamaroan’ny olona tamin’io fotoana io. Na izany aza, tao anatin’ny fotoana fohy ny niitaran’ny afo ka nampiredareda ireo trano marobe ireo. Raikitra ny antso vonjy ka izao niafara tamin’ny fahafatesan’olona izao. Efa tamin’ny 4 ora maraina vao maty tanteraka ny afo.
Araka ny voalazan’ny polisy sy ny mpamonjy voina, tsy mbola fantatra mazava ny anton’ny firehetana. Anatin’nyfanadihadiana tanteraka izy ireo. Nanazava ny mpamonjy voina fa efa 30 minitra taty aorian’ny firehetana izy ireo vao nahazo antso. Efa nisy olona may tao anatin’ny trano hazo. “Kila mihitsy, ary ny olona teny an-toerana no namantatra azy ireo. Nalefa eny amin’ny HJRA ny razana rehetra. Tonga teny Anosibe, omaly maraina, ny tompon’andraiki-panjakana nizaha ny zava-misy.
Loza tsy nahy…
Misy mihevitra fa niniana natao ity firehetana teny Anosibe ity. Mifanandrify amin’ny toe-draharaha eto amin’ny firenena rahateo amin’ny fifandroritana amin’ny voka-pifidianana. Matetika, miseho rahateo ny haintrano amin’ireny faritra iva ireny rehefa miakatra ny hafanana amin’ny resaka politika. Rehefa tsy eny Anosibe, eny Ampasika sy Antohomadinika eny.
Mazàna, ataon’ny sasany fitaovana politika ny toe-javatra tahaka izao. Ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana no ahafantarana ny tena marina manodidina ity firehetana ity. Ny mampalahelo, nisy ny aina nafoy sy fahasimban-javatra betsaka.